Ukumaketha Kwamaselula: Amawebhusayithi, Izinhlelo Zokusebenza, i-SMS namakhodi we-QR - Okunethezeka noma Kuyadingeka?
Amasayithi Omakhalekhukhwini, Izinhlelo Zokusebenza, i-SMS namakhodi we-QR - Ukunethezeka noma Kuyadingeka?
NgoLwesithathu, Novemba 2, 2011 NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 UChad Pollitt
Nge-2015, i i-Intanethi ephathekayo izodlula ukusetshenziswa kwedeskithophu futhi ngonyaka odlule ukusetshenziswa kwayo sekuphindwe kabili. Abenzi bezinqumo abaningi ngokwengeziwe basebenzisa iwebhu yeselula ukuze bafinyelele kulwazi abaludingayo ukwenza ukukhetha kokuthenga. Kuze kufike ku-50% wamathuba aku-inthanethi angahle aphuthelwe ngokungabi nakho nokusebenzisa isu leselula lenkampani noma lomkhiqizo. Eminyakeni embalwa ezayo leli phesenti lizoqhubeka nokukhuphuka. Umbuzo uwukuthi - Ngabe iwebhusayithi yakho yenzelwe iwebhu yeselula futhi ukumaketha kwakho okungenayo kusizakala ngeselula?
Ngo-Okthoba 27, UJohn McTigue (EVP) kanye ne- UChad Pollitt (I-Dir. Ye-Social Media & Search Marketing) ye-Kuno Creative yethule “Ukumaketha Okungenayo Kwamaselula.” Isethulo siveze izindawo ezine eziyinhloko zokumaketha ezingamaselula nokucatshangelwa
1. Amawebhusayithi weselula
Imiklamo emihle kakhulu yokwakhiwa kwewebhusayithi yeselula
Izinselelo zamawebhusayithi kuselula
Idizayini yewebhu ehlakaniphile
Hlukanisa isayithi leselula uma kuqhathaniswa nokwakhiwa kwewebhu okuphendulayo
Okuqukethwe okuhle kwamawebhusayithi weselula
2. Izicelo zeselula
Buhle nobubi bezinhlelo zokusebenza
Amasayithi weselula uma kuqhathaniswa nezinhlelo zokusebenza
3. SMS / imiyalezo
Izibalo nezibalo zabantu
Izibonelo zomkhankaso we-SMS
Ukuhamba ngomkhankaso we-SMS
4. Amakhodi we-QR
Izibonelo zomkhankaso wekhodi ye-QR
Ukuhamba ngomkhankaso wekhodi ye-QR
Ngokwengeziwe, isethulo sihlolisise ubuchwepheshe namathuluzi avumela ukuthunyelwa okunamandla kwemikhankaso yokukhangisa ngamaselula ngenkathi kudingidwa izindlela zokuhlanganisa ngokukhululekile iselula kumikhankaso yamanje ye-inthanethi neyingaxhunyiwe ku-inthanethi. Amanye amathuluzi okuxoxwe ngawo afaka phakathi Thwebula ngu-44Doors, I-MoFuse futhi HubSpot.
Ukumaketha okungenayo kwamaselula akuseyona indawo yokunethezeka kubakhangisi abangayicabangela. Ngokuya ngezibalo, ukusetshenziswa kanye namathrendi kuyinto edingekayo ezinkampanini nemikhiqizo efisa ukufinyelela nokuxhumana nabantu ababhekiswe kubo. Labo abakhetha ukungazishiyi besengozini kulabo abancintisana nabo abakhetha ukusebenzisa amandla okukhangisa okungenayo okungamaselula. Ngemininingwane engaphezulu, zizwe ukhululekile ukubuka ividiyo ephelele ye- isethulo sokumaketha esingena ngaphakathi.
Tags: Ukumakethwa Kwamaselula NethebulethiIdizayini Yewebhusayithi YeselulaAmakhodi we-QRSMS
Ingabe i-Youtube iyabulala i-TV?